Barcelona guul muhiim ka gaartay kooxda Sevilla %
Barcelona guul muhiim ka gaartay kooxda Sevilla
By Ramzi Yare	 On Oct 7, 2019
Barcelona ayaa gaartay guul muhiim ah kulan ka dhacay garoonka Camp Nou kusoo dhaweysay kooxda Sevilla, balse dhibaato hor leh ayaa lasoo daristay maadaama laba casaan laga siiyay laba ka mid ah xiddigaheeda.
Kooxda Balaugrana ayaa bilowga xilli ciyaareedkaan dhibaatooyin natiijo xumo ah lasoo daristay, balse tan iyo imaatinka Lionel Messi waxaad moodaa iney kasoo kacayaan halkii ay joogeen.
Afar gool oo ay kala dhaliyeen Dembele, Suarez, Vidal iyo Messi ayaa xasuuq u noqday Sevilla, waxeyna natiijadaas keentay in Barcelona ay laba dhibcood u jirsato hogaanka horyaalka oo ay ku fadhiso Real Madrid oo guul muhiim ah heshay kulankii sabtidii.
Balaugrana waxey shaqeysatay 16-dhibcood kaliya 8-ciyaarood oo ay dheeleen kulamada La Liga, bandhigoodii qeybta hore kulankii caawa ayaana muujinaya iney lasoo baxeen awood dheeri ah.
Ernesto Valverde ayaa isbadal weyn ku sameeyay kooxdiisa, keydka ayuu dhigay Griezmann, Jordi Alba iyo Busquets kuwaas oo ahaa xiddigaha joogtada ah ee kooxda tan iyo bilowgii fasal ciyaareedkaan.
Lionel Messi wuxuu dhaliyay laadkiisii xorta ahaa ee 43-aad, sidoo kalana wuxuu dhaliyay goolkiisii 100-aad oo uu kasoo togto meel ka baxsan xerada ganaaxa dhamaan tartamada oo dhan.
Luis Suarez ayaa dhaleeceyn badan kadib muujinaya inuu kusoo laabtay qaabkiisii ugu wacnaa, shabaqa ayuu gaaray isagoo dhaliyay goolkiisii 3-aad laba kulan gudaheed, si qurux badan ayuuna usoo taabtay shabaqa Sevilla.
Daqiiqadahii ugu dambeeyay ciyaarta waxaa Barcelona laga saaray RonaldAraujo oo casaan toos ah qaatay iyo sidoo kale Ousmane Dembele oo gudoomay jaalihiisii labaad.
Labada xiddig ayaa hal dhacdo ay dhibaatada kasoo gaartay, Araujo ayaana dhulka dhigay Chicharito isagoo ahaa qofka ugu dambeeya kooxdiisa, halka Dembele uu mudaharaad ka sameeyay go’aanka gaarsoorka.
Tartanka Gool Dhalinta Premier League Oo Meel Xiiso Leh Maraya Yaa hogaaminaya
Kulan kaTirsan Tartanka Degmoyinka Gobalka Banaadir ee kooxaha Degmada Waaberi iyo Shangani